श्री लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा सिइओको मनोमानी, जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दै संस्था डुवाउने खेल - Sagarmatha TV
ललितपुर । ललितपुरको पुलचोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको श्री लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले जथाभावी रुपमा, नियम विपरित ऋण प्रवाह गरेको खुलासा भएको छ । सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले आफूखुसी रुपमा आफ्ना नजिकका व्यक्ति र हुँदै नभएका व्यक्तिलाई समेत ऋण प्रवाह गर्ने गरेको प्रमाण भेटिए सँगै सस्थाको बास्तविकता खुलासा भएको हो ।
संस्थाले गत बर्ष सरकारलाई साढे ३ करोड बढी राजश्व बुझाएर आफूलाई उत्कृष्ट सहकारी बनाउन सफल देखिएपनि संस्था भने धरासायी बन्दै गएको प्रमाण समेत भेटिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले किर्ते ऋणी खडा गरेर आफूखुसी ऋण प्रवाह गर्ने देखि मनलागी रुपमा ब्याजलाई साँवामा जोडी त्यसको पनि व्याज लिने सम्मका कर्तुत खुलेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्र रिझाउन सफल भण्डारीले त्यही शक्तिको आडमा मनोमानी गरेका छन् ।
आफ्नालाई काखा अरुलाई पाखा
सब्बु सिंह (भण्डारी), जो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीकी एकदमै विश्वासीली र नजिककी व्यक्ति समेत मानिन्छिन् । उनले श्री लालिगुँरास बहु–उद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट २०६९ साल कात्तिकमा ऋण लिएको देखिन्छ । त्यस यता करिव ५ बर्षको अवधिमा विभिन्न मितिमा गरि ९ पटक ब्याज बापतको रकम छुट दिएको देखिन्छ । सहकारीको कर्जा प्रवाहको नियम अनुसार, यसरी ब्याज रकम समेत छुट दिएर ऋण दिन मिल्दैन । यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
पहिले सहकारीले रकम हिनामिना गरेमा अहिले मुलुकी ऐन ठगीको महलअन्तर्गत मुद्दा चलाईंदै आएको थियो । तर, अहिले सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार, सहकारी ठगीलाई पनि बैकिङ कसुर सरह परिभाषित गरी मुद्दा बैकिङ कसुर सरहको कार्य विधिमै चल्ने व्यवस्था छ । कसुरमा १ लाख रुपैयाँसम्म बिगोमा एक वर्ष कैद हुनेछ । यस्तै, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोडसम्म ६ देखि आठ वर्ष कैद सजाय हुने छ ।
दश करोडभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएपनि न्युनतम ८ देखि १० वर्ष सम्म कैद सजाय हुनेछ । तर, श्री लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी सवै शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सफल दरिएका छन् । सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग लगाएतका नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुले समेत भण्डारीलाई देखेको नदेखे झैं गर्छन् । केही पीडितहरु उजुरी लिएर प्रहरीकोमा पुगेपनि प्रहरीले समेत वास्ता नगरेको उनिहरुको गुनासो छ । यस्तै गरी मनलागी रुपमा ऋण प्रवाह गर्दै जाने हो भने श्री लालिगुराँस सहकारी संस्थाको हालत पनि ओरियन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडको जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यस सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नु पर्छ ।
भनिरहनु पर्दैन सहकारी भनेको सदस्यहरु वीच आफै नै सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता सिद्धान्त अनुसार आफै सञ्चालित हुने स्वायत्त संस्था हो । तर सहकारी क्षेत्रमा समाजका तस्कर, माफिया, खराव नियत भएका मान्छेहरुको बोलवाल भएकाले ठगी अपराध बढ्दै गएको पाइन्छ ।
जथाभावी घर जग्गामा लगानी गरेर छोटो समयमा रातारात धनी बन्ने र सदस्यहरुको निक्षेप माथि खेलवाड गरिंदा अहिले साना निक्षेपकर्ता र सदस्यहरु सहकारीबाट ठगिन पुगेका छन् । सहकारीमा भैरहेका आर्थिक अनियमितता र ठगी धन्दा नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायले अुनगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
7 March, 2018 at 9:24 am
blog from start to end. http://viverdonegociodigital.com/ganhar-dinheiro-no-blog/
9 March, 2018 at 3:34 pm
Yo news 200%. Right ho , baru depositers haru le belai maa soche hunchha. Uska aru kartut haru tyasta anaginti nai chhan baru media haru le tyaslai bargaining point nabanai swachha ra honestly dekhayera published garda hunchha.